सम्पुर्ण देशबासी हरुलाइ सरकारबाट आयो यस्तो निर्देशन ! ( सबैले एकपटक पढ्नैपर्ने ) – Life Nepali
सम्पुर्ण देशबासी हरुलाइ सरकारबाट आयो यस्तो निर्देशन ! ( सबैले एकपटक पढ्नैपर्ने )
काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको कहरकाबीच कसैका घरमा पाहुना नबोलाउन र पाहुना बनेर नजान पनि आग्रह गरेको छ । काठमाडौं लगायत मुलुकका केही जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो आग्रह गरेको हो । सर्वसाधारणलाई अति आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर नजान आग्रह गरेको छ । “काठमाडौं उपत्यकाजस्तै घनाबस्ती भएका सहरहरुमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको छ,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “कोरोना संक्रमित बढ्दै गए पनि पसल, कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, सवारी साधनमा र खासगरी लाइनमा बस्दा कतिपय व्यक्तिहरुले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन ।” *** पुरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
उनले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल पसलमा लापरवाही देखिने गरेको बताएका छन् । नजिकै गएर सामान किन्न ह’तार गर्ने, भिडभाड बढाउने जस्ता काम भएको र यसले जो’खिम बढ्ने उनको भनाई थियो । “बि’ना सावधानी अपनाइ हामी यातायतका साधनमा बसिरहेका छौं,” उनले भने, “पाहुना वा साथीभाइसँग हुहाल गरी चाडपर्व पनि मनाइरहेका छौं । कार्यालयहरुमा अझै पनि बैठक गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको पाइन्छ । यस्तै स–साना व्यवहारहरु र हतार गर्ने बानीले नै हामीलाई कोरोनाको जोखिममा पारिरहेको छ ।”
घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य माक्सको प्रयोग गर्न पनि डा गौतमले आग्रह गरेका छन् । उनले सामान किनमेल गर्न जाँदा वा कसैलाई भेट्दा कम्तीमा दुई मिटरको दुरी राख्न पनि अपिल गरेका छन् । ज’थाभावी न’थुक्न र बाहिरवाट आएपछि वा केही वस्तु छोएपछि कम्तिीमा २० सेकेण्ड साबुन पानीले हात धुन पनि आग्रह गरेका छन । स्वास्थ्य सुरक्षाका अभ्यासहरुसँगै अति आवश्यक काम नपरी घरबाहिर नजान पनि आग्रह गरेको छ ।
प्रवक्ता डा। गौतमले भनेका छन्, “घरमा पाहुना नबोलाऔं र पाहुना बन्न पनि नजाऔं । यदि कोरोना संक्रमित स्थानबाट आउनु भएको छ वा विदेशबाट आउनुभएको छ भने अवश्य १४ दिनसम्म सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरी क्वारेन्टिनमा बसौँ ।”
Previous अस्पतालले भर्ना लिन न’मानेपछि, २० बर्षिया यु’वतिको बा’टोमै ग’यो ज्या’न !
Next ओलि सरकारले सार्वजनिक गर्यो, कोरोना सम्बन्धी ५ महत्वपूर्ण निर्णय, ( एकपटक सबैले पढ्नै पर्ने ) !
47 mins ago Life Nepali